काठमाडौं, २ चैत । सात वर्षअघि फिल्म क्षेत्रमा भित्रिएकी लक्ष्मी बर्देवा आज नेपाली फिल्म क्षेत्रमा राम्रो अभिनय गर्ने अभिनेत्रीको दुर्लभ सूचीमा पर्छिन् । उनले दर्जन बढी नाटक र दर्जन जति फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् ।
दुई साताअघि मात्रै हलमा रिलिज भएको फिल्म ‘बुलबुल’ मा उनले ‘भीमा’ बनेर निर्वाह गरेको महिला टेम्पो चालकको भूमिकाले यतिबेला फिल्म वृत्तमा खुब तारिफ बटुलिरहेको छ । उनै भीमा अर्थात लक्ष्मी बर्देवासँग गरिएको अन्तरंग कुराकानी तल हेर्नुहोस् –
मेरो ‘माला’मा पनि छोटो रोल थियो । ‘सेतो बाघ’मा त वाइड सिनबाट एउटा रोल गरेकी थिएँ, जहाँ म आफैँले पनि आफूलाई चिन्न मुश्किल पर्छ । ‘धुलो’मा पनि जम्मा एक सिन नै थियो । तर, ती सब मैले नाटक सिक्न आएका बेला आइपरेर गरेको फिल्म थियो ।
यसको अर्थ छोटो रोल गर्नै हुन्न भन्ने होइन । एउटा एक्टरले लिड क्यारेक्टर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त म मान्दै मान्दिनँ । हरेक क्यारेक्टरको फिल्ममा उत्तिकै महत्व हुन्छ । सिनको अनावश्यक लम्बाईले मात्रै एक्टरको काम निर्धारण गर्नु ठीक होइन । फिल्ममा ‘पासिङ सिन’ मात्रै गर्दैछु भने पनि आफ्नो तर्फबाट हन्ड्रेड पर्सेन्ट एफोर्ट लाउनुपर्छ ।
आ’को भए त कसले छोड्थ्यो होला ! (हाँस्दै) । यद्यपि म अहिले जे काम गरिरहेकी छु, त्यो पनि क्यारेक्टर मन पराएरै गरिरहेको छु । म मान्छु, मसँग हिरोइन मेटरियल छैन । म डाइरेक्टरले खोजेजस्तो स्लिम र चार्मिङ पनि छैन होला तर म जे गर्छु आफ्नो तर्फबाट लिड रोल गरे जत्तिकै मिहिनेत गर्छु । ‘बुलबुल’ मा ‘भीमा’ को भूमिका निभाउँदा पनि मैले त्यत्तिकै मिहिनेत गरेकी थिएँ ।
तपाईंलाई कहिल्यै हिरोको वरिपरी घुमेर नाच्ने ‘सो कल्ड हिरोइन’ बन्न मन लागेन ?
रोमान्स त मैले पनि गर्‍या छु नि चंगा भन्ने फिल्ममा (लामो हाँसोसहित)। तर सिरियस्ली भन्नु पर्दा हामीकहाँ दर्शकले हिरोइन मेटरियल पनि खोज्छन्, नखोज्ने होइन । दर्शकले खोजेपछि मेकर्सले किन नखोजुन् ! त्यसैले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न दुइटा आदर्शको कुरा गरेर केही पनि हुँदैन । सबै कलाकारको आ–आफ्नो फर्म हुन्छ । जो जहाँ अटाउँछ, त्यही काम गर्ने हो । हुन त म आफूलाई एकदमै राम्री देख्ने मान्छे हो तर अरुको नजरबाट पनि कहिलेकाहीँ आफूलाई हेर्नुपर्छ । म कस्तोमा सुहाउँछु, कस्तोमा सुहाउँदिनँ, त्यो आफूलाई थाहा हुनुपर्छ ।
हो, यो प्रश्न उठाउनु एकदमै आवश्यक छ । हिरो हुनलाई अब मिलेको जिउ हुनुपरेन तर हिरोइन हुनलाई किन स्लिम र क्युट हुनुपर्‍यो ? सायद फिल्ममेकर्सले आँट नगरेर हो कि ! कसै न कसैले सुरुवात गरेपछि पक्कै त्यो परम्परागत मानसिकता हट्थ्यो कि !
तपाईंलाई दर्शक माझ कुन फिल्मले नोटिस गरायो भन्ने लाग्छ ?
‘डमरुको डन्डिबियो’ ले जस्तो लाग्छ । त्यहाँ क्यारेक्टर हुनुको जस्टिफाई कथाले नै गथ्र्यो । फेरि दर्शकले चिन्नलाई त धेरै सिन चाहिने भन्ने पनि हुँदैनरैछ । ‘मिस्टर झोले’ मा पनि मेरो सानो क्यारेक्टर थियो तर दर्शकले याद गरिराखे । म आफैँलाई दुई सिन मात्रै गरे पनि सन्तुष्टि मिलेको क्यारेक्टर ‘हरि’को पनि हो ।
भीमा जस्तै महिला टेम्पो चालक पनि पछ्याउनु भयो ?
टेम्पो कुदाउन सिकेँ । त्यस्तै क्यारेक्टरसँग हिडेँ पनि । विनोद दाइ (निर्देशक)ले नै एकजना टेम्पो चलाउने दिदी चिनाइ दिनु भएको थियो । उहाँसँगै म हिँडे । मैले फिल्ममा गाडीको पैसा उठाउने भाइलाई ‘कति राम्रो भाइ’ भन्दै जिस्काउँछु नि, हो त्यो सब त्यो दिदीबाट प्रभावित हो । त्यो दिदीले त्यसरी नै ट्राफिक पुलिसलाई जिस्क्याउँथिन् ।
त्यो जसले पनि हेर्छ होला जस्तो लाग्छ (हाँस्दै) । मैले हेर्दिनँ भन्दा तपाईं पत्याउनु हुन्छ र ?
त्यस्तो त भा’को छैन । हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको युगमा बाँचिरहेको मान्छे हो । अझ त्यसमाथि हामी आर्ट फिल्डमा काम गरिरहेको मान्छेलाई के लाग्छ भने हामी आफ्नो ढंगमा बाँच्ने हो । म त आफ्नो जिन्दगी आफू अनुशासित भएर आफ्नो हिसाबले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
तर फिल्ममा ‘भीमा’ त्यस्ती देखिन्न ।
आफ्नो श्रीमान्को स्वभारबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि उनी यौन प्रताडित छ । उसले पर्दामा ब्लु फिल्म हेरिरहँदा ऊभित्रको अपूर्ण यौन इच्छा पनि बोलिरहेको हुन्छ । मलाई त के लाग्छ भने बाहिर जत्तिसुकै बोले पनि घरभित्र बोल्न नसक्नु हाम्रोजस्तो समाजमा हरेक घरको समस्या हो । त्यसैले मलाई ‘भीमा’ हाम्रै समाजको यथार्थ जस्तो लाग्छ ।
प्लस टु पढ्दापढ्दै युएनमा जागिर लाग्यो– स्वीच बोर्ड अपरेटरका रुपमा । तर, बिहान ८ बजे नै अफिस पुग्नुपर्ने भएकाले कलेज जान पाउँदिनँ थिएँ । तलब आकर्षक थियो । तर पैसाकै लागि मात्रै काम गरिरहेजस्तो थियो, मनमा खुशी थिएन । अनमिन फिर्ती भयो, जागिर छुट्यो । पत्रकारिता भूतले छोडेको थिएन । प्लस टु पत्रकारिता नै पढेँ । एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो तस्बिर आइडियल कलेजको ब्रोसरमा देख्नुभएछ ।
फेस फोटोजेनिक लागेछ । त्यसकै आधारमा एउटा बैंकको विज्ञापनमा कामको अफर आयो, गरेँ । त्यही दाइले ‘माला’ फिल्मका लागि सुमिना घिमिरे (अभिनेत्री)को साथीको रोल गर्ने केटी चाहिएको छ, तिमी गर भनेर अफर गर्नुभयो, मैले गर्दिनँ भनेँ । धेरै कर गर्नुभएको थियो फोनमा । ममीले सुन्नुभएछ । ममीले गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि फिल्म खेल्न तयार भएँ ।
तपाईं फिल्ममा काम गरेपछि मात्रै पो थिएटरमा आइपुग्नु भएको हो ?
हलिउड–बलिउडमा अझै चर्किरहेको ‘मीटू मुभमेन्ट’ बारे तपाईको धारणा के छ ?
हाम्रो कला क्षेत्र लगभग यो विषयमा मौन जस्तै देखियो । यहाँ दुव्र्यवहार नै नहुने भएर हो ?
हामीकहाँ मान्छेलाई भगवान् बनाउने चलन छ । भगवान् कस्तोलाई बनाइन्छ ? अवश्य पनि त्यस्तोलाई बनाइन्छ, जो ठाउँमा छ । र, उसको नराम्रो कुरा कसैले गर्‍यो भने ऊ त्यो क्षेत्रबाट बहिष्कृत हुन्छ । किनभने दुनियाँले देउता मानेको मान्छेलाई उसले आरोप लाग्यो । हो, यसकै डरले यहाँ कोही बोल्न सक्दैनन् ।
पाँच वर्षअघि, मलाई एउटा फिल्मका लागि अडिसन भनेर बोलाइएको थियो । अडिसन कहाँ–कसरी हुन्छ, त्यति बेलासम्म त्यसको खास ज्ञान थिएन । अडिसन गोठाटार (काठमाडौं) मा भनिएको थियो । विश्वास गरेकै दाइले त्यहाँ लिएर जानुभयो । पुल नपुग्दै एउटा रिसोर्ट रैछ । म गएँ । फिल्म क्षेत्रको एकदमै नाम चलेका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । दुई–तीन वटा हिट फिल्म दिइसक्नुभएको थियो । एकदमै पिएको हुनुहुन्थ्यो । म त भर्खर १९–२० वर्षकी केटी, सबैकुरा बारे एकदमै निर्दोष थिएँ ।
बच्चा ठानेर होला मलाई उहाँले ‘तिम्रो फोटो हेरेको थिएँ, ठीकै छ । हामीलाई तीन जना लेडिज क्यारेक्टर चाहिएको छ । खेल्ने हो त ? एउटामा तिमीलाई खेलाउन सकिन्छ भन्न थाले । मैले पनि थिएटर र घरमा सोध्नुपर्छ भनेँ । त्यसपछि उहाँले रिसोर्टको सहयोगीलाई बोलाउनुभयो । अनि ‘भाइ, त्यो पछाडिको रुमको ताल्चा खोल त भन्नुभयो’ मैले किन भनेर सोधें । एकदमै डराइसकेकी थिएँ ।
एक दुई दिन म पूरै डिप्रेस भएँ । यो क्षेत्र मेरो लागि होइनजस्तो लाग्यो । तीन चार दिन काममा पनि गइनँ । साथीहरुले त्यसको कारण छोड्न लागेको ? भनेर सम्झाएपछि फेरि ज्वाइन भएँ । आज पनि मलाई त्यो मान्छे छेउछाउ देख्दा डर लाग्छ । त्यो मान्छेले मलाई यो क्षेत्रमा टिक्न नदिने कुरा गरेको थियो । त्यसैले मेरो एउटा सपना छ– कुनै दिन त्यो ऊ मेरो अगाडि फिल्मको अफर लिएर आओस् अनि मैले त्यो बेलाको घटना सम्झाउँदै मुखैभरको जवाफ दिन पाऊँ । मैले मेरा एक दुई जना साथीलाई नाम लिएरै यो घटना सुनाएको छु । सुनाकै मध्ये एक जना साथीलाई उसले त्यसैगरी फिल्मको अफर गरेर बोलाइराको थियो रे ! उसले थर्काएर पठाइदिछे । -शुक्रबार साप्ताहिकबाट